1 Samoela 8 - Ny Baiboly
1 Samoela toko 8
Ny nangatahan'ny vahoaka mpanjaka.
1Nony efa antitra Samoela, dia ireo zanany no natsangany hitsara an'Israely. 2Joela no anaran'ny zanany lahimatoa, ary Abià no anaran'ny faharoa. Tany Bersabe izy ireo no nitsara. 3Tsy mba nanara-dia azy ny zanany, fa nivily nanao izay hahazoana, mandray kolikoly sy nandika ny fahamarinana. 4Nivory ny loholon'Israely rehetra nankany amin'i Samoela, tany Ramà, 5nanao taminy hoe: Hianao ity efa antitra ary ny zanakao tsy manara-dia anao, koa mpanjaka toy ny an'ny firenena rehetra no atsangano aminay hitsara anay.
6Tsy sitrak'i Samoela izany teny izany noho izy ireo nanao hoe: Omeo mpanjaka izahay hitsara anay. Dia nivavaka tamin'ny Tompo Samoela; ary hoy Iaveh tamin'i Samoela: 7Henoy ny feon'ny vahoaka araka izay rehetra holazainy aminao, satria tsy mba hianao no ariany fa izaho no ariany, dia ny tsy hanjakako aminy intsony; 8toy ny efa nataony mandrakariva hatramin'ny andro nitondrako azy niakatra avy tany Ejipta ka mandrak'izao, fa nilaozany nanompo andriamani-kafa aho, toy izany koa no anaovany anao. 9Ary ankehitriny, henoy ny feony; nefa manaova teny vavolombelona aminy, ary ampahafantaro azy ny fahefan'ny mpanjaka izay hanjaka aminy.